Nnweta nke Da Vinci's Salvator Mundi tinyere aka na Geopolitical Mediation gụnyere Vatican Museums
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Nnweta nke Da Vinci's Salvator Mundi tinyere aka na Geopolitical Mediation gụnyere Vatican Museums
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • investments • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Vanuatu
Da Vinci's Salvator Mundi na Louvre Abu Dhabi nwere ike bụrụ nsonaazụ nke mgbasa ozi gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, gụnyere ego itinye ego nke Anglo-Saxon, nchekwa ọkụ ego na Mohammad Bin Salman (Onye isi okpueze nke Saudi Arabia), onye n'ezie bridled ikpeazụ ụgwọ akwụ ụgwọ. O doro anya na a na-enyocha ihe osise ahụ gburugburu 700 nde dollars.
In June 2017, Saudi Arabia na ndị ya na ha jikọrọ aka, gụnyere ndị United Arab Emirates, kwụsịrị njikọ mba nile na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Qatar, nke na-echeta ọtụtụ afọ eguzobewo onwe ya dị ka onye ndu na ahịa ahịa ụwa site na Qatar Museum Authority (Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani).
Ka ọ dị ugbu a, dịka usoro iwu si dị, Vatican Museum (12 na mkpokọta) nyochachara ọtụtụ Salvator Mundi Ohere na ọkachasị otu esi atụgharị uche ngosipụta nke Da Vinci's Christ.
Usoro nke nkwupụta dị iche iche dị iche iche na isiokwu ahụ site n'aka ndị protagonists dị iche iche na ire ere - nke ọ bụla na-emegide nke gara aga - na-atụ aro na eserese ahụ bụ ihe mgbawa na teknụzụ, ma o doro anya na, na njedebe, ndị protagonists dị iche iche họọrọ izere isiokwu ahụ nkà mmụta okpukpe “ọkụ” dị ka nke nwere ike imebi ire nke ọrịre ahụ.
The Salvator Mundi eserese nwekwara ike imejọ echiche Saudi: amachibidoro eserese mmadụ na ọkachasị eserese nke ndị okpukperechi n'okpuru iwu Saudi nke Islam siri ike, nke a na-ewelite okwu dị mkpa n'ihi na ọ na-egosi Jizọs dị ka "Onye Nzọpụta nke ”wa" (Dixit The New York Times).
N’oge gara aga, ebe a na-edebe ihe mgbe ochie na Vatican nwere nnwere onwe doro anya inyocha, kwado ma, ebe o kwesịrị ekwesị, wee nweta ọrụ nka akụkọ ihe mere eme nke mere ka o doo anya na mgbasa nke okwukwe Ndị Kraịst. Ọ bụ ezie na ịnwe ụlọ ọrụ RC a ji nwayọ nwayọ, ọ ka dị na narị afọ nke 21 maka ọrụ ọrụ nka niile na-egosipụta akara nke okwukwe ndị Kraịst; na Jizọs Kraịst na-ese Leonardo Da Vinci dị ka "Onye Nzọpụta nke ”wa" bụ otu n'ime ụdị nnọchianya dị otú ahụ.
Artprice nwere ike ikwenye na ire ere Da Vinci nke «Salvator Mundi » gụnyere n'ezie usoro nke esemokwu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana njikwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị banyere ihe metụtara okpukpe na nkà mmụta okpukpe. Nsonaazụ ikpeazụ, yana eserese na-egosipụta na Louvre na Abu Dhabi, bụ n'ihi nke a niile ihe na ịnshọransị uru nke artwork na 700 nde dollars o yikarịrị ka o kwekọrọ n'ụzọ zuru oke na uru eserese dị na Museum Industry Museum.
Iji nwetakwuo ihe ọmụma, gụọ a 7 Disemba 2017 ntọhapụ https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2017/12/07/news-of-da-vinci_s-salvator-mundi-being-exhibited-at-the-abu-dhabi-louvre-and-soon-at-the-paris-louvre-entirely-endorses
Akụkọ banyere Da Vinci's Salvator Mundi ka egosiri na Abu Dhabi Louvre -na adịghị anya na Paris Louvre- kpamkpam na-akwado Artprice'Museumlọ Ọrụ Museumlọ Ọrụ Museum
Inye nkọwa pụrụ iche nke usoro akụnụba ọkaibe n'azụ nnweta na nso nso a Leonardo Da Vinci si Salvator Mundi -nkọwa nke ndị Agence France Presse họpụtara taa-, Artprice egosila usoro ihe onodu aku na uba nke oma.
Ndokwa maka inweta Da Vinci masterpiece dabara adaba na Museum Industry® nke Artprice chepụtara na 2005 wee kụzie kemgbe ahụ.
Dị ka thierry Ehrmann si kwuo, Thewa niile's isi ihe mgbe ochie na-ejide akaụntụ na Artprice, gụnyere n'ezie Louvre. Na United Arab Emirates, ya na isi obodo ya Abu Dhabi, bụ otu n'ime obodo iri kacha rụọ ọrụ nke na-enweta Artprice's ọdụ data…"
Nke a bụ ihe ndibiat: Paris Louvre akanyam a "Louvre" aha ka Abu Dhabi rue 2037. Nke ikpeazu na-akwụ ngụkọta nke 400 nde euro gaa Paris Louvre maka ikike iji aha Louvre. Nke ikpeazụ, tinyere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie 13 nke France, ndị nnọkọ iji gbazinye ọrụ nka Abu Dhabi - Ulo oru ihe mgbe ochie 10 agbazinyego ihe kariri ihe osise 350.
Ndokwa ndị a na-egosi Museum Industry® na-arụkọ ọrụ n'ime netwọkụ, na-eji ụgbọ ala itinye ego na usoro iwu dị mgbagwoju anya.
Ha gosipụtara n'ụzọ doro anya na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ na otu nke ngalaba akụ na ụba ọhụrụ - Museum Industry® - dịka Artprice kọwara ya na 2005.
Na nkenke, anyị nwere usoro azụmaahịa ejiri kpochapụ ego (ntinye akwụkwọ na ntinye ego) yana ọpụpụ - ụgwọ ikike ikikere yana ego akwụ ụgwọ… n'okwu a, ọnụahịa Da Vinci Salvator Mundi, ọnụahịa nke Artprice buru amụma ọnwa atọ tupu ire ya.
The 450 nde dollars akwụ ụgwọ maka eserese a bụ nsonaazụ nke mkpebi itinye ego nke ọgụgụ isi dabere na ego Louvre na-enweta kwa afọ (ebitda) ọ bụghị n'ụfọdụ oke ọhịa. Ndị kwenyere na ọ bụ nke ikpeazụ ahụ aghọtaghị na Museum Industry® ugbu a bụ isi ihe owuwu nke ahịa nka ụwa.
Ihe owuwu a na - ebuputa onu ahia site na imeputa uko na uzo ato isi nke ahia ahia: Old Masters, Modern Art and Contemporary Art, ma anyi huru na n'ime nhazi ulo oru a, ntughari nke "ihe ahia di egwu" nwere ike inwe mmetụta ozugbo na ego tiketi.
Artprice - nke ga - ebuputa ihe ngosipụta ihe ngosi nka nke ya (Artmuseum100®) na mbido 2018 - gosipụtara mgbanwe nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, nke ndị ahịa ya rịrị okpukpu iri n'ime afọ iri atọ gara aga.
Artprice na ngalaba akụnụba ya na-arụkọ ọrụ na Twitter ruo afọ abụọ na nnukwu ihe atụ nke nde mmadụ 39 a chọpụtara na-eso ụzọ nwere njikọ nke ụlọ ọrụ ihe ngosi nka 100 mara mma nke ụwa.
Dị ka thierry Ehrmann si kwuo, Nnukwu mmụba a nke Global Museum Industry Museum na-aga n'ihu na nnukwu asọmpi ike dị nro n'etiti mba ụwa, ọkachasị ike ya (China / US) na Gulf States. N'ezie, asọmpi ike dị nro na-eduga n'ahịa nka na-enweghị isi maka nsonaazụ ahịa ọhụụ dị egwu. N'echiche anyị edebara nke ọma, anyị nwere ike ịhụ nsonaazụ gburugburu ọnụ ụzọ ijeri dollar site na 2020.
Dị ka onye ndu ụwa n'ihe ọmụma banyere Art Market, Artprice nwere ike irite uru naanị na uto a nke Art Market, nke sitere n'ike na-abawanye nke oflọ Ọrụ Ngosi Ihe Ọmụma.